NFT ဆိုတာ ဘာလဲ ? (အပိုင်း – ၁) – MyTech Myanmar
NFT ဆိုတာ ဘာလဲ ? (အပိုင်း – ၁)
အနာဂတ်မှာ ရေပန်းစားလာနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေကို ပြောပါဆိုရင် A.I (Artificial Intelligence) , AR (Augmented Reality) နဲ့ VR (Virtual Reality) တွေအပြင် Blockchain, Cryptocurrency နဲ့ NFT အကြောင်းတွေကိုပါ ထည့်ပြောရမှာပါ။ ဒီနည်းပညာတွေ အားလုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာက အပြင်မှာ တကယ်မရှိတဲ့ အတုအယောင် ကမ္ဘာကြီး (Virtual World) ဖြစ်လာမယ့် Metaverse ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ NFT ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုမျိူးလဲ ဆိုတာကို အဓိကထားပြီး ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
NFT , Cryptocurrency နဲ့ Blockchain အကြောင်း
NFT ဆိုတာက Non-fungible Token ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ လဲလှယ်လို့ မရတဲ့ ဘောင်ချာတိုကင်လို့ အလွယ်မှတ်ယူထားနိုင်ပါတယ်။ လဲလှယ်လို့ မရပေမယ့် အရောင်းအဝယ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ NFT တွေဟာ Cryptocurrency လိုမျိူး Blockchain နည်းပညာပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားပြီး စုဆောင်းထားနိုင်တဲ့ Digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Digital ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရာမှာ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်း၊ Gif ဖိုင်၊ In-game Item နဲ့ Tweet တွေလိုမျိူး Digital အနုပညာလက်ရာတွေ ပါဝင်ပြီး Blockchain ဆိုတာကတော့ အရောင်းအဝယ်မှတ်တမ်းတွေကို ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာ သိမ်းပေးထားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က Digital စာရင်းဇယားစာအုပ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Blockchain နည်းပညာကို သုံးလိုက်တာက NFT တစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်ကို လူတိုင်း သိနိုင်၊ အတည်ပြုနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Fungible Token အမျိူးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Ethereum နဲ့ Bitcoin တို့လိုမျိူး Cryptocurrency တွေနဲ့ မတူတာက NFT တွေဟာ လဲလှယ်လို့ မရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – Bitcoin တစ်ခုဟာ တခြား Bitcoin တစ်ခုနဲ့ တန်ဖိုးညီမျှသလို မြန်မာငွေ ၁ သောင်းကျပ်ဟာလည်း တခြား မြန်မာငွေ ၁သောင်းကျပ်နဲ့ တန်ဖိုးညီပြီး လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ NFT မှာတော့ အဲ့ဒီလိုမျိူး လဲလှယ်လို့ မရဘဲ အရောင်းအဝယ်ပဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျော်ကြီးမှာ 1 Ethereum ရှိရင် တုတ်ကြီးမှာလည်း 1 Ethereum ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျော်ကြီးက NFT တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် တုတ်ကြီးအပြင် တခြား ဘယ်သူမှ ကျော်ကြီးလိုမျိူး ပုံစံတူ NFT ကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါဘူး။ NFT တစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်ဟာ တစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိနေမှာမို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Non-fungible Token (NFT) ဆိုပြီး ခေါ်ကြတာပါ။
NFT သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ထူးခြားချက်များ
ပထမဦးဆုံး NFT ပရောဂျက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်တုန်းက Ethereum Blockchain ပေါ်မှာ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်မှာတော့ NFT တွေရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးဟာ မြင့်မားလာပြီး ဒီနှစ် ပထမ ၃လပတ်မှာတင် NFT ရောင်းချမှုတွေဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၂ဘီလီယံကျော်ထိ ရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တွစ်တာရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Jack Dorsey ဟာ သူရဲ့ ပထမဆုံး တွစ်ကို NFT အဖြစ်ရောင်းချခဲ့ရာမှာ ၂.၉ မီလီယံကျော်ထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ “just setting up my twttr” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုဟာ NFT ကြောင့် မီလီယံချီပြီး တန်ဖိုးကြီးသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Beeple လို့ လူသိများတဲ့ နာမည်ကြီး Digital အနုပညာရှင် Mike Winklemann ရဲ့ “EVERYDAYS: The First 5000 Days,” Digital အနုပညာလက်ရာဆိုရင် ကန်ဒေါ်လာ ၆၉.၃ မီလီယံနဲ့ NFT အဖြစ် စံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံကို လူတိုင်း ကြည့်ရှု့နိုင်တဲ့အပြင် သဘောကျပါက Download လုပ်ပြီးပါ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
Photo – EVERYDAYS: The First 5000 Days (NFT)
ဒါဆို မေးစရာရှိလာတာက အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်၊ သိမ်းထားနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကို လူတွေက ဘာလို့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်အကျခံပြီး ဝယ်လဲ ဆိုတာပါ။ ဒီနေရာမှာပဲ NFT က စကားပြောလာပြီး Proof of ownership လို့ခေါ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားကို ပြသပေးတာက NFT ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တန်ဖိုးအကြီးဆုံး NFT တွေကို အောက်ပါလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
NFTs တွေကို ဘာအတွက် အသုံးပြုကြလဲ ?
Blockchain နည်းပညာနဲ့ NFT တွေဟာ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ Content Creator တွေကို ငွေရှာဖို့အတွက် မဟာအခွင့်အရေးကြီး ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Artists တွေဟာ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို ရောင်းချဖို့အတွက် ပြပွဲတွေ ဒါမှမဟုတ် လေလံတင်ပွဲတွေအပေါ်မှာ မှီခိုစရာ မလိုတော့လို့ပါ။ Artists တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရာတွေကို NFT အဖြစ် ကျွန်တော်တို့လို Consumer တွေဆီ တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်ပြီး အကျိူးအမြတ်လည်း ပိုရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီး Celebrity တွေနဲ့အတူ Content Creator တွေဟာ NFT လောကထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သတင်းတွေဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြားနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
NFT တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြတာလဲဆိုတာကို နားလည်လွယ်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်လောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသား/မင်းသမီး တစ်ယောက်က သူရဲ့ Digital ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ ဒါမှမဟုတ် ဗီဒီယို တစ်ခုခုကို NFT အဖြစ်ရောင်းချနိုင်သလို နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ သီချင်း၊ သီချင်း Album တွေကို NFT အဖြစ် ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ Game Developer တွေဟာ သူတို့ရဲ့ In-game Item ကို NFT အဖြစ် ရောင်းချနိုင်သလို နာမည်ကြီး Brand တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါတဲ့ Digital လက်ရာတစ်မျိူးမျိူးကို NFT ဖြစ် ဖန်တီးရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို NFT တွေကို နာမည်ကြီးတဲ့ လူတွေပဲ ဖန်တီးရောင်းချနိုင်တာလားဆိုပြီး မေးစရာရှိကောင်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဖြေကတော့ No ပါ။ NFT တွေကို လူတိုင်း ဖန်တီးရောင်းချနိုင်ပြီး သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ NFT တွေကို လူတွေက စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး အနာဂတ်မှာ ရေးပန်းစားလာနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
NFT တွေကို ဘယ်လိုဝယ်မလဲ၊ ဝယ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
NFT တွေကို ဝယ်ယူဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရောင်းချဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရောင်းအဝယ် လုပ်နိုင်တဲ့ OpenSea.io, Foundation.app နဲ့ Rarible တို့လိုမျိူး Marketplace တွေရှိပြီး ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း Cryptocurrency တွေနဲ့ ဝယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဝယ်ယူဖို့အတွက် အရင်ဆုံး NFT နဲ့ Cryptocurrency တွေ သိမ်းထားနိုင်တဲ့ Digital Wallet တစ်ခုရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ မိမိရဲ့ Wallet ထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ NFT Provider က လက်ခံမယ့် Cryptocurrency တစ်မျိူးမျိူး ရှိဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ Cryptocurrency တွေကိုတော့ Coinbase, Kraken, eToro နဲ့ PayPal တို့လိုမျိူး Platform တွေကို သုံးပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း ( ၂ ) ဆက်ရန် ရှိသေးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားပါက စောင့်မျှော်ဖတ်ရှ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မေတ္တာရပ်ခံချက် – စာရေးသူသည် NFT အကြောင်းအား လေ့လာနေဆဲ ဝါသနာရှင်တစ်ဦးသာဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်အဆင့် မဟုတ်သေးတာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်များ၊ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့သည်ရှိသော် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျ။
MyTech Myanmar2021-11-22T15:21:52+06:30November 22nd, 2021|Blockchain, Cryptocurrency, News, NFTs|